Akanjo maoderina manao akanjo amin'ny fizarana 2017 - fohy sy lava, miaraka amina korset sy tapaka, mandoitra sy mpanodina
Akanjo hariva amin'ny baolina - misafidy ny safidy tonga lafatra!
Ny fialan-tsasatra amin'ny sekoly dia zava-nitranga tena manan-danja, izay miandry amim-pahazotoana ny tanora nahazo diplaoma sy ny ray aman-dreniny. Ny lehilahy rehetra, indrindra ireo tovovavy, dia manomana tsara ny androany, ary mieritreritra ny fialan-tsasatry ny fialan-tsasatra. Ny akanjo tsara tarehy ho an'ny fizarana diplaoma dia aseho amin'ny sehatra maro, ary tsy mora ny misafidy safidy mety aminy.
Ny akanjo hariva amin'ny fizarana 2017
Ny fizaran-taona tsirairay dia mitondra ny fironana vaovao amin'ny karazan-damba rehetra an'ny vehivavy. Ankoatr'izany, ny fivoaran'ny lamaody sasany dia mitoetra ho tsy azo ekena mandritra ny taona maro. Ny akanjo maitso tsara amin'ny taona 2017 dia mety ho samihafa be, fa ny tanjon'izy ireo dia ny manantitrantitra ny fahatanorana sy ny fahamendrehan'ny tompony. Ireo fepetra ireo dia tsara indrindra amin'ireo modely manaraka ireto:
Ny akanjo hariva amin'ny fizarana diplaoma miaraka amin'ny lamasinina sy bika fohy. Ireo zavatra ireo dia maneho sy maneho manodidina ny tongony mamelom-bolo amin'ny hatsaran-tarehy tanora, ary ny fiaran-dalamby dia mahatonga azy ireo ho mamy sy araka izay azo atao ny fepetra mifanaraka amin'ny fepetra;
Safidy an-dàlambe misy akanjo lava sy korset ambony dia sokajin'izao lamaodin'izao tontolo izao. Ao anatin'ity akanjo ity, ny zazavavy rehetra dia afaka mahatsapa toy ny tovovavy tanora;
Ny akanjo hariva - ny zana-marika amin'ny fizarana diplaoma dia tsy mety afa-tsy amin'ny ankizivavy kely sy malefaka. Mijery marevaka sy mamitaka izy ireo, noho izy ireo dia malaza amin'ny tanora nahazo diplaoma izay te hisitra bebe kokoa.
Ny akanjo maivana amin'ny akanjo lava vita amin'ny rambony dia aseho amin'ny mini, midi ary maxi-length. Asongadin'izy ireo ny fahamendrehana sy ny maha-vehivavy ny tovolahy iray, ary ampifandraisiny amin'ny toerany. Rehefa misafidy io akanjo io ianao, dia tokony hifantoka manokana amin'ny halalin'ny sary nohazavaina - tsy tokony hianjera eo ambany ny tady ny tavy, satria raha tsy izany dia mety ho hitan 'ny akanjo na vulgar loatra ny akanjo;
Farany, ny akanjo hariva amin'ny baolina lava miaraka amin'ny akanjo lava dia mijery koketsy sy mistery. Raha toa ka nilatsaka tamin'ity akanjo ity ny safidinao, dia mila mieritreritra ianao fa amin'ny toetr'andro mafana, ny tovovavy ao anatin'izany dia mety tsy ho mora.
Toetrandro lava lava ho an'ny fizarana 2017
Ny akanjo lava maingoka amin'ny volom-borona dia safidy tsara ho an'ny ankamaroan'ny tanora. Mandritra izany fotoana izany, dia tsy mety amin'ny kofehy kely izy ireo - amin'ity tranga ity, ny maxi-lamin'asa dia afaka maneso vazivazy ratsy ary mampitombo ny fitomboan'ny tompony amin'ny tsy fahampiana. Ho an'ny tanora nahazo diplaoma dia ho tsara kokoa raha ho moramora na hipopotama kely ny satroka amin'ny akanjo toy izany, satria ity asa ity dia hanao akanjo hariva amin'ny fankalazana ny fampisehoana 2017 mafimafy kokoa.
Akanjo hariva fohy ho an'ny fizarana 2017
Ny akanjo maizim-bolo tsara tarehy ao amin'ny bal dia tena tsara ho an'ny ankizivavy. Tsy mampitombo ny sarin'ny mpanangona azy izy ireo ary mamela azy hampiseho amin'ny endrika tanora sy marefo. Ankoatra izany, amin'ny akanjo toy izany, ny kintana dia tsy hahatsapa ny tsy fahampiana na amin'ny andro mafana. Mandritra izany fotoana izany, safidy fohy dia tokony hiahiahy ireo nahazo diplaoma ireo izay tsy afaka mirehareha amin'ny firindrana tanteraka. Noho izany, afaka mampifantoka ny sain'ny hafa amin'ny tongony feno na vatana ambony izy ireo.
Ny lokon'ny akanjo amin'ny prom 2007
Ny akanjo hariva amin'ny baolina baolina 2017 dia aseho amin'ny loko lehibe indrindra. Ao amin'ny trano fivarotana sy fivarotana dia afaka mividy modely marevaka tsara tarehy, akanjo tsara tarehy tsara tarehy sy fitaovana manerana izao tontolo izao izay mety tsy ho an'ny hetsika manetriketrika, fa koa amin'ny akanjo isan'andro amin'ny hoavy. Mandritra izany fotoana izany, mba hijanonana amin'ny toetr'andro, ny Stylista 2017 dia manoro hevitra amin'ny fikarakarana manokana ny akanjo hariva amin'ny famaranana ireto loko manaraka ireto:
dranomasina. Io rafitra loko io dia tonga lafatra ho an'ireo ankizivavy izay mikasa ny hitafy ilay akanjo taty aoriana. Izy no safidy tsara ho an'ny mainty manerantany, izay hitan'ny olona maro loatra amin'ny tovovavy iray;
ny manga sy ny manga ny manga dia marefo, mamiratra ary mahasarika. Izy no hanasongadina ny hatsaran 'ilay mpanao mofomamy tanora manga ary tsy mamela azy tsy ho voamarina;
Ny akanjo marevaka marevaka dia mijery tsara ireo tanora mahafatifaty izay vao miditra amin'ny olon-dehibe. Araka ireo mpanakanto lamaody malaza, maneho ny fahadiovana, ny fitiavana ary ny fahamarinan-toetra izy;
Ny jiro pasitera mavokely dia manintona ireo natiora malemy sy romantika;
Ny mavo manankarena amin'ny vanim-potoana ho avy dia iray amin'ireo lamaody indrindra. Ho an'ny akanjo fety dia hanao koa izy;
Farany, ny mena mena dia afaka mamadika ilay kintana ho olona milefitra sy mahafaty - ilay mpandresy ny fonon'ny lehilahy. Ny akanjo an'io loko io dia tsy mety ho an'ireo mpianatra izay matahotra ny hikomy.
Dresses à mode
Ny akanjo lava ho an'ny diplaoma fanaovana diplaoma dia tokony ho tsara tarehy sy mahafinaritra. Satria tsy maintsy mandany an'ity akanjo ity ny ankizivavy lamaody mandritra ity andro ity, dia tsy tokony hahatsapa ny tsy fahampiana. Ankoatr'izay, ny akanjo hanaovana ny fankalazana ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny sekoly dia tsy tokony ho menatra loatra sy malaina, satria izy dia hanao ny tovovavy iray tena izy.
Alakamisy hariva hariva
Ny akanjo lava mamela ny zazavavy tsirairay hahatsapa ho toy ny printsy tena izy. Ny akanjo hariva ho an'ny antokom-grady dia mety ho ela sy haingana, fa ny stylists dia manoro tanora nahazo diplaoma hisafidy ny safidy farany ho an'ny tenany. Mandritra izany fotoana izany, ny fanesoana ny tongotry ny ramatoa dia tsy afaka miala amin'ny lanja fanampiny fotsiny. Ny ampahany ambony amin'ny toeram-pitsaboana toy izany dia tokony ho toy ny fandeferana sy laconic satria ny ankapobeny dia fehiloha sarotra.
Akanjo hariva amin'ny gorodona ao amin'ny bal
Ny akanjo tsara tarehy eny amin'ny gorodona ao amin'ny bal dia tena malaza eo amin'ireo zatovovavy sy ny reniny, satria izy ireo dia manamarika ny firaisana ara-piraisana sy ny firaiketam-peo mahatalanjona. Ny vokatra toy izany dia tokony hatao amin'ny fitaovana tsy misy lanjany, ohatra, sehatra voajanahary, satria amin'ity tranga ity dia hamorona ny vokatra mety ho an'ny olona malemy sy mampihetsi-po izay milaza ny fialan-tsasatra amin'ny fahazazana ary mihetsi-po amin'ny fiainana andavanandro.
Ny akanjo manetriketrika mankany amin'ny tany dia aseho amin'ny endrika samihafa. Ny ankamaroan'ny tanora nahazo diplaoma dia ireto manaraka ireto:
Modely tsy misy akanjo sy rongony miaraka amin'ny akanjo lava lava lava, mampahatsiahy ny akanjo amin'ny printsy;
safidy amin'ny akanjom-boninahitra nipoitra ary tendan-tava mihetsiketsika loatra amin'ny fomba grika na fomba amam-panao Empire , izay ny lohahevitra dia eo amin'ny tsipika fehikibo;
"siramamy" amin'ny lamasinina kely.
Hariva hariva-retro ao amin'ny bal
Mamorona sary mahafinaritra mahatalanjona sy tsy manam-paharoa dia hanampy amin'ny famerenan-dàlana amin'ny alina ny akanjo lava amin'ny fomba retro, raha ilaina, starlets fanampiny amin'ny antsipiriany maoderina. Noho izany, ireo vokatra ireo dia mijery tsara tsara miaraka amin'ny hatsikana kanto, lava tanana lava sy firavaka vintage. Raha te hanao zavatra fohy dia azonao atao ihany koa ny mampiasa ny tifitra retro. Ohatra, amin'ny hariva izay natokana hizara amin'ny sekoly, dia mety ny akanjo vintage amin'ny akanjo marevaka na ny tavy kely.
Fotoam-pandalovana fianarana amin'ny grady
Ny famerenana ny akanjo maoderina ho an'ny ankizivavy dia mirakitra fiofanana 2 avy hatrany, ny iray amin'izany dia mety kokoa amin'ny fanombohana ny fotoam-pivoriana, ary ny iray hafa amin'ny dihy, izay tsy tokony hisy zavatra tokony hanelingelina ny mpianatra tanora ary hanilihana ny hetsika. Fandroana fohy izy ireo, ary misy ankizivavy lava be dia be. Raha azo atao dia afaka haingana sy mora haingana izy io - satria amin'ny vokatra toy izany dia omena zipera na rivotra mahazatra.
Akanjo hariva miaraka amin'ny tapa-bolana
Ny akanjo marevaka sy tsara tarehy mandritra ny famaranana matetika dia manana fihenam-bidy avo, izay manome ny endriky ny maha-lahy sy maha-vavy azy . Toeram-pisakafoanana miaraka amin'io endri-javatra io dia mety ho an'ny hatsaratsarana tanora, tsy amin'ny tarehimarika tonga lafatra ihany, fa amin'ny ampahany kely ihany koa. Rehefa misafidy akanjo miaraka amin'ny renim-pianakaviana reny ny mpianatra, dia tsy maintsy jerena ny mpianatra mba hijery ilay nahazo diplaoma dia tsy dia mendri-pihetseham-po loatra. Noho izany antony izany dia tsy tokony ho hita eo amin'ny akanjon'ity akanjo ity ny akanjo mofomamy na ny ampahany ambony amin'ny kapa na pantyhose.
Akanjo hariva amin'ny kofehy ao amin'ny balala
Ny akanjo maizim-boninahitra ao amin'ny baolina lava mitaingotra ambony dia mahafinaritra sy mahafinaritra. Afaka manitsy ny silhouette amin'ny tompony izy ireo ary mampifanaraka sy mampiavaka azy, ary, ankoatra izany, dia manantitrantitra ny tebiteby na dia amin'ny fotoana tsy ahafahan'ny kintana aza tsy hirehareha amin'ny aspeniny. Mandritra izany fotoana izany, ny kofehy dia manana singa iray izay afaka misoroka ny hatsarana amin'ny hatsembohana.
Noho izany, ny haben'ny karazana akanjo toy izany dia mety hahatonga ny kintana hisalasala ny tsy fahasalamana mifandraika amin'ny tsy fahafahana maka aingam-panahy lalina. Mba hisorohana an'izany, ny fanandramana akanjo toy izany dia tokony hanatona ny andraikitra rehetra ary tsy misy hividy vokatra izay mahatonga ny fisefoana na dia kely fotsiny aza. Ankoatra izany, ny Stylista dia tsy manoro hevitra ny mividy ireo zavatra korset mialoha, satria misy ny fahombiazana lehibe amin'ny fanatsarana sy ny fahatsapana loza mahatsiravina.
Ny akanjo hariva ho an'ny antokona fizarana grady ho feno
Ny akanjo fitarihana fankalazana ho an'ny ankizivavy feno dia atolotra be dia be. Ny fisafidianana eo anivon'izy ireo dia tokony hiorina amin'ny tolo-kevitr'ireo stylista mozika voatanisa amin'ity lisitra manaraka ity ny safidy mety:
Ny ankamaroan'ny "pyshechek" no tombony lehibe indrindra amin'ilay tarehimarika dia fehiloha tsara tarehy sy mahavariana. Tsy maintsy asongadina ny fijery tsara ao anaty akanjo iray. Izany dia azo atao amin'ny fanampian'ny sary v fluffatious V, izay, na izany aza, dia tsy tokony ho lalina loatra. Ny fanamafisana ny hatsaran-tarehin'ny faritra decollete dia mety ho vokatra amin'ny karazana "bando", saingy ity safidy ity dia mety ho an'ny ankizivavy manana tànana mamirapiratra sy mendri-piderana;
Ny hakanton'ny habeny mitovitovy amin'ny tolo-bidy sy ny fakan-tsela mihodinkodina dia manome fialan-tsasatra tsara ho azy, ohatra ny akanjo na ny mahazatra miaraka amin'ny halava farany amin'ny tany;
Ny ankizivavy manana vavon-trondro mazàna na fantsona marefo dia misy safidy mifanaraka amin'ny tandroka manify.
Dresses amin'ny endriky ny vintage
Amin'ny inona ny akanjonao amin'ny baskety?
Photosession amin'ny natiora amin'ny fahavaratra - hevitra
Amin'ny inona ny manao akanjo mipaoka?
Photoshoot any an-dranomasina ho feno
Mametaka tapa-kazo eny amin'ny rihana hazo
Bibikely ary ny fitaovana tsara indrindra hiadiana amin'izy ireo
Peeling ny voankazo - fomba fitsaboana salantsalany sy ny fomba fisakafoanana 3 home
Silikônina ho an'ny kiraro
Manala ny fahavoan'ny lanjany
Ventolin ho an'ny atidoha
Sakafo amin'ny zaza ateraky ny dentrôka atopika: sakafo
Ana de Armas sy Keanu Reeves
Pasta ao amin'ny Multivariate
Sakafo italiana ao an-trano - fomba fanamboarana
Sakafo Meksikanina miaraka amin'ny vary
Ambony ambony amin'ny fiposahan'ny soroka
Tolerahana - Famaritana
Safidy ny menaka fanosotra
Kamifubuki amin'ny fantsika